Sing Swim Sway.....: 03/2008
ကမ်းရိုးတန်းဒေသသွား ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိက သင်္ဘောလိုင်း ပြေးဆွဲမည်
via ပြည်တွင်းသတင်း on 3/28/08
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများဖြစ်သောမြိတ်၊ ကော့သောင်းဒေသများသို့သင်္ဘောဖြင့်သွားရောက်လိုသော"ခရီးသည်များအတွက်လက်မှတ်များကို မဲနှိုက်ဝယ်ယူစရာမလိုဘဲဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမည့် ပုဂ္ဂလိကသင်္ဘောလိုင်းတစ်ခုပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ MIN TUN Treading မှပြေးဆွဲ"မည့်ယင်းသင်္ဘောတွင်ရိုးရိုးတန်း၊အထူးတန်းဟူ၍ခွဲခြားထားပြီး ၂ယောက်ခန်း၊၄ယောက်ခန်း၊ ၆ယောက်"ခန်း၊ ၈ယောက်ခန်းဟူ၍အသီးသီးပါရှိကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်မှမြိတ်သို့အထူးတန်း ဖြင့်သွားရောက်"လိုသူများအတွက် တစ်ယောက်လျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် ကော့သောင်းခရီးစဉ်အတွက် ၇၀၀၀၀ ကျပ်သတ်"မှတ်ထားသကဲ့သို့ မြိတ်မှကော့သောင်းအတွက် ၃၀၀၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း Min Tun မှ မခင်"သင်းမော်ကပြောသည်။ ရန်ကုန်မှမြိတ်သို့ရိုးရိုးတန်းဖြင့်သွားရောက်လိုသူများအတွက် တစ်ယောက်လျှင်"၃၅၀၀၀ကျပ်နှင့် ကော့သောင်းခရီးစဉ်အတွက် ၅၀၀၀၀ကျပ်သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊မြိတ်မှကော့သောင်း"အတွက် ၁၇၀၀၀ကျပ်သတ်မှတ်ထားကြောင်း မခင်သင်းမော်ကဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းခရီးစဉ်တွင်"လိုက်ပါလိုသောကလေးငယ်များအတွက် ၃ နှစ်မှ ၁၀နှစ်အထက်ကလေးများကို သတ်မှတ်နှုန်းထားတစ်"ဝက်သာပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ယင်းခရီးစဉ်တွင် ခရီးသည် ၄၂၈ ဦးလိုက်ပါနိုင်ပြီး မြန်"မာ့ကြယ်ငါးပွင့်မှသင်္ဘောဖြင့်ယခု ၂၇ ရက်မှစတင်၍ အပတ်စဉ်ပုံမှန်ပြေးဆွဲသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ"သည်ဟု ၂၀၀၈ခုနှစ်မတ်လ၂၇ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
via Bangkok Pundit by Bangkok Pundit on 3/22/08
I have already panned Samak for his comments on Burma, but I am amazed at this criticism:
Prime Minister Samak Sundaravej was attacked by critics on Monday after making favourable comments about the ruling Burmese junta and indicating the government plans to focus on making economic gains from Burma.
BP: A resumption implies that the Surayud government hadadifferent policy than Thaksin, but I am struggling to find any difference. When the Burmese military started killing protesters and monks, there was at first silence by the Thai government and then the Burmese were defended by Gen. Sonthi. As Kavi stated in The Nation:
It is not difficult to understand why Thailand's foreign policy under Surayud has been an utter failure, especially in relation to Burma. He should have paid more attention to the situation in Burma, which he closely monitored and was engaged with while Army chief. Instead, he has been cowed and speechless on the crisis there.
BP: So how was the Surayud government's policy different? There is no resumption of the "Thaksin regime" policy towards Burma. The policy has been the same since the late 80s, engage and take as much natural resources from Burma as possible. Human rights isasupposed factornotaconsideration.
ဗုဒ္ဓဝင်ပုံပြင်၊ ဂမ္ဗီရ ဇတ်လမ်းတွေမှာ ဇော်ဂျီတွေက သူယောင်မယ်ပင် က (မိန်းမပျိုအသွင်ရှိတဲ့) သူယောင်သီးတွေကို သူတို့ရဲ့ ဆေးတောင်ဝှေးနဲ့ တို့ပြီး ပျော်ပါးကြတယ် လို့ ဖတ်ရ ကြားရတော့ သူယောင်ပင်ဆိုတာ တကယ်ရှိရဲ့လား။ သူယောင်သီးက ဘယ်လိုပုံသွင်ရှိသလဲ ဆိုတာ အတွေးပွားမိပါတယ်။ (ဇော်ဂျီလဲ အရမ်းဖြစ်ချင်တာပေါ့။)
အောက်ကပုံကတော့ Google Groups တစ်ခုကရတာပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံ Petchabun Province က သူယောင်မယ်ပင်လို့ ပြောတာပဲ။ သတင်းစာ၊ TV ထဲမှာလဲ မတွေ့မိပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က နောက်တာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူယောင်ပင် က သူယောင်သီး ဆိုတာ ဒီလိုပုံစံ ဖြစ်နိုင်ပါလား လို့ မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်တာပေါ့။
Labels: ဓမ္မ - ဂမ္ဗီရ, အထွေထွေ
မြန်မာ့ငါးတန်များကို ရုရှားသို့ အမြောက်အမြားတင်ပို့ရန်စီစဉ်
Ref : Irrawaddy ကြည်ဝေ/ရန်ကုန် | မတ် ၃၊ ၂၀၀၈
အိတ်စပို့ဈေးကွက်မရှိသောကြောင့် ဈေးအနည်းငယ်သက်သာစွာဖြင့် စားသုံးနိုင်သော မြန်မာ့ငါးတန်များကို ရုရှားနိုင်ငံသို့ ပုံမှန်တင်ပို့ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ငါးတန်များမှာ အခြားသောသားငါးများထက် ဈေးသက်သာသဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အများအပြား စားသုံးလေ့ ရှိသည့်ငါးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
“ငါးတန်အသားလွှာတွေကို တလတန်ချိန်နှစ်ထောင်အထိ ရုရှားကို လစဉ်ပုံမှန်ပို့ပေးရလိမ့်မယ်။ မတ်လထဲမှာ စပြီးတင်ပို့နိုင် မှာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌဦးကြီးငွေက ဆိုသည်။
ယခင်ဈေးကွက်ခက်ခဲနေသော ငါးတန်များကို ရုရှားနိုင်ငံသို့ လစဉ်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် နှစ်ဘက်နားလည်မှု စာချုပ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့က ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် မြန်မာ့ငါးတန် အသားလွှာများ သာမက မြန်မာ့ရေထွက်ပစ္စည်းများကိုပါ ပုံမှန်လစဉ်ဝယ်ယူရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပါရှိသည်။
“သူတို့လိုချင်တဲ့ တလတန် ၂၀၀၀ ကိုတော့ စစချင်းပို့စမှာ အခက်အခဲရှိတယ်။ ပထမလမှာတော့ တန် ၂၀၀ လောက်ပဲ ပို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အမြန်ဆုံး သူတို့လိုအပ်တဲ့ ပမာဏရအောင် လုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ” ဟု အသင်း၏ ဒုတိယ ဥက္ကဌက ပြောသည်။
ရုရှားသို့ ပုံမှန်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနှင့် ငါးတန်များတိုးချဲ့မွေးမြူသွားကြရန် စီစဉ်လျက် ရှိရာ မွေးမြူကာလအနေဖြင့် ၁၀ လအချိန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရှရှားနိုင်ငံမှ လိုအပ်သော ပမာဏပြည့်မီနိုင်ရေးအတွက် မတ်လဆန်းမှ စတင်ကာ ယခုမွေးမြူမည့် ငါးတန်များ ကန်ဖော်မည့် ၁၀ လမတိုင်ခင် အချိန်ထိ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ငါးတန်ရောင်းချမှုကို ကန့်သတ်သွားတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် သီရိမင်္ဂလာဈေး ငါးဒိုင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းငါးထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလျက်ရှိနေပြီး ငါးစားသုံးမှု ဖူလုံရေးကို အနည်းငယ်ထိခိုက်နေ သည်ဟု ကြားသိရသည်။ ယခုအခါ အခြေခံလူတန်းစားများ အများဆုံးစားသုံးလျှက်ရှိသော ငါးတန်များကို တန်ချိန် အမြောက်အမြားတင်ပို့ပါက ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း ဈေးအဆမတန် မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက် ငါးစားသုံးမှုကို ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း သီရိမင်္ဂလာ ငါးဈေးမှ ငါးလုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။
“ငါးတန်က အသားများပြီး ဈေးသက်သာတော့ ဆင်းရဲသားတွေ တော်တော်များများ စားကြတာများတယ်။ ငါးမြစ်ချင်းထက် ငါးတန်ကိုပိုပြီးစားကြတယ်။ ငါးမြစ်ချင်းက ဈေးနည်းနည်းပိုတဲ့အပြင် အရိုးများတော့ အသားများတဲ့ငါးတန်ကိုပိုစားကြတယ်” ဟု သိရိမင်္ဂလာဈေးရှိ ငါးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ ငါးဈေးမှာ ငါးမြစ်ချင်း၊ ငါးကြင်း၊ ငါးတန်၊ ငါးရံ့၊ ငါးခူအပါအ၀င် အနိမ့်ဆုံး တပိဿာလျင် ကျပ် ၂၅၀၀ ဈေးရှိပြီး၊ အမြင့်ဆုံးမှာ တပိဿာလျင် ကျပ် ၄၅၀၀ ထိဈေးရှိကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ငါးဈေးမှာ အမြင့်ဆုံးတပိဿာလျင် ကျပ် ၃၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး အနိမ့်ဆုံး ၁၅၀၀ သာရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ ဆိတ်သား စသည့် အသားဈေးများကြီးမြင့်လျက်ရှိသောကြောင့် အခြေခံလူတန်းစား အများစုမှာ ဈေးသက်သာသောငါးကိုပင် အသားအစား စားသုံးနေကြရသည်။ ဈေးသက်သာသော ပင်လယ်ငါးအပါအ၀င် မွေးမြူရေးငါးများကို စားသုံးသူများမှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာန ဈေးကွက်စစ်တမ်းအရ သိရသည်။
လက်ရှိပြည်တွင်း ငါးထုတ်လုပ်မှုမှာ ဖောက်ပြန်လျှက်ရှိသောရာ သီဥတုအခြေအနေ၊ မြင့်တက်လာသော အစာဈေးနှုန်းများ နှင့် အထွေထွေစရိတ်စကများကြောင့် ကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်အနေနှင့်မူ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နှစ်ဆခန့် မြင့်တက်လာသဖြင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင် များက လျှော့မွေးလာကြကြောင်း ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောကြားသည်။
“တဧက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်က ၂၀၀၅ ခုမှာ ကျပ် ၂၅ သိန်းလောက်ပဲ ကုန်ပေမယ့် ခုချိန်မှာ ၄၅ သိန်း လောက်ဖြစ် သွားပြီ။ အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ကြတော့ ငါးမွေးသူတွေကလည်း လျှော့မွေးလာကြတယ်။ ငါးကန်တွေ ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်း ကုန်မှာတော့တွက်လို့ရတယ်။ ၂၀၀၅ နဲ့ ၂၀၀၇ ဆိုရင် မွေးမြူနှုန်း ထက်ဝက်လျော့သွားတယ်၊ ၂၀၀၈ မှာလည်း ထွက်နှုန်း တိုးလာဖို့ မမြင်ဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကုန်းတွင်းအင်းအိုင်များမှ ငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ယခင်သုံးနှစ်ကာလထက် ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့မြင်ရ ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာနမှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာန၏ စာရင်းများအရ လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အင်းအိုင်ငါးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်မှုသည် စုစုပေါင်း ပိဿာချိန် ၄၅ သိန်းခန့်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပြီး ၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာလက ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ပမာဏမှာ ပိသာချိန် ၅၆ သိန်းရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းရှိ နေရာဒေသအတော်များများ၌ ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့် ငါးမွေးမြူကန် ဧကပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော် ရေလွှမ်းခံခဲ့ရသဖြင့် အင်းအိုင်များမှ ငါးအမြောက်အမြား ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါဋ္ဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးမွေးမြူရေးကန်စုစုပေါင်း ၂၁၄၃၅၁ ဧကရှိပြီး ထိုအထဲမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဧရာဝတီတိုင်းမှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ ငါးမွေးမြူရေးကန်များ၏ လက်ရှိထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တဧကလျှင် ပိဿာချိန် ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃ သန်းရရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက် သန်း ၁၂၀ ကျော်ရရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်၊။
မြန်မာ့ရေထွက်ပစည်းများကို တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ် တင်ပို့နေရကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ မြန်မာ့ရေထွက် ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံပေါင်း ၁၃၅ ရုံရှိပြီး ၃၅ ရုံမှာ အီးယူဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဋ္ဌာနမှ သိရသည်။